I-Amulet Enamandla Yezingelosi Ezinkulu Nemimoya Yama-Olimpiki - Umhlaba Wezintelezi
I-Amulet Enamandla Yezingelosi Ezinkulu Nemimoya Yama-Olimpiki
Material Ayisebenzi Wasebenza
I-amulet ene-Seal of the Archangels kanye neMimoya ye-Olympian isetshenziselwa ukunxenxa noma yiziphi zezingelosi ezinkulu noma imimoya futhi icele umusa wabo. Kulentelezi engakholeki hhayi ama-arcangels angabizwa kuphela kepha futhi nemimoya eyi-7 yama-Olimpiki. Le amulet izokusiza ukuxhumana nabo bonke lapho kudingeka.
Ukucela noma yikuphi nje kuthiwa yizikhathi ze-3 ezilandelwa ngu: Mina, (igama lakho) ngicela (igama lengelosi enkulu noma umoya) ukukhonza umgomo wami. Ngemuva kwalokhu wena uchaza ngokucacile umgomo wakho kuye futhi uqede nge: "Sicela uphume lapho futhi wenze isifiso sami sigcwaliseke. Ukukhokha kwami ​​kungukubonga engikuzwayo lapho uletha impumelelo. "
Ungasebenza kanjani neMimoya yama-Olimpiki
Kunezindlela ezi-2 zokugqoka le-amulet:
Kufihliwe: uzosebenzisa ukhiye omude ukuze i-amulet isondele enhlizweni yenhliziyo yakho, ezokwenza imimoya isebenze ngamandla akho
Kubonakala: I-amulet igqoke eduze ne-chakra yomphimbo wakho. Kulokhu, imimoya izosebenzela amandla akho kepha ikakhulukazi emandleni angaphandle
Ukuphela kwento okufanele uyenze ukuyigqoka. Akukho okunye, okuthembisiwe. Akudingeki unikele noma unikele nganoma yini. Izingelosi Ezinkulu, i-Abrasax kanye ne imimoya yama-olympic ngizohlala nginawe ukukusiza.
Inketho entsha ye-Supreme color amulet iyinhlanganisela yamandla ephini ye-lapel eqala ukusebenza ngokushesha kanye ne-amulet ejwayelekile edinga izinsuku ezingama-28 zokuqalisa. Le amulet entsha ingathintwa abanye abantu kepha idinga ukuvuselelwa njalo ezinyangeni eziyi-9. Uzothola i-recharge yokuqala mahhala. Ngokushaja kabusha nokuhlanza ungasebenzisa iphedi ekhethekile ongayithola lapha:
Izingelosi ezinkulu & Ukushaja Imimoya yama-Olimpiki kanye nePad Yokuhlanza